Taiwan ရှိစက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူအရည်အသွေးမြင့် Rotary စည်အထူ ထုတ်လုပ်သူနှင့် Rotary စည်အထူ ပေးသွင်းသူ၏လမ်းညွှန်ကိုရှာပါ။
အတွက်စက်ရုံတစ်ရုံနှင့်အတူပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်းနှင့်ပြည်ပသို့ပို့ကုန်အဖြစ် Taiwan, CHI SHUN MACHINERY PLANT CO., LTD. ပြီးပြည့်စုံစက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှု, အမှီအခိုကင်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်သုတေသန, စျေးကွက်နှင့်ကုန်သွယ်ရေးလုပ်ကိုင်နေတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါသည် Rotary စည်အထူ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်များနှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများအခြားရွေးချယ်စရာ application များအတွက်ဖောက်သည်သတ်မှတ်ထားသောဒီဇိုင်းများနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ. ထုတ်ကုန်တွေထောက်ပံ့ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါတယ်။
ငါတို့ထုတ်ကုန်ကြီးမားသောအမိန့်မျှော်လင့်ဖောက်သည် '' လိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ထိုအခါငါတို့သည်ငါတို့၏ဖောက်သည်တွေနဲ့ရေရှည်ဆက်ဆံရေးတည်ဆောက်ရန်မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပုံစံ - RDT
Multi ဖြင့်တည်ဆောက်ထားသော Rotary Drum မျက်နှာပြင်အထူ-အားကြီးသော filter အထည်ပါဝင်ပါသည်သောထောင့် rotary,အနွေးဓာတ်နှင့်အပိုအစိုဓာတ်ကိုခွဲခြားရန်အနိမ့်မြန်နှုန်းဖြင့်လှည့်.
မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုရွှံ့နွံများအတွက် Rotary Thickening Device ဝတ်စုံ,5 အတွက်ထိန်းသိမ်းရန်ထူပြီးနောက်အာရုံစူးစိုက်မှု-8%နှင့်ရေနည်းသောနှင့်အတူ dewatered ရွှံ့နွံကိတ်မုန့်စေသည်.
999999999 http://schema.org/InStock USD 2020-12-31 https://www.sludgetreatment.com.tw/my/rotary-drum-thickener.html
Rotary စည်အထူ ၏အကောင်းဆုံးလမ်းညွှန်ကိုစျေး ၀ ယ်ပါ။ Rotary စည်အထူ ကုန်ထုတ်လုပ်သူ၊ ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူ၊ လက်ကားရောင်းသူနှင့်ဖြန့်ချိသူ Rotary စည်အထူ ၏အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ Taiwan